कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने, १२ को परिक्षा भने यसरि हुने ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने, १२ को परिक्षा भने यसरि हुने !
माध्यमिक तहको कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै गर्नेछ । कक्षा १२ को परीक्षाको हकमा कानुन स्पष्ट उल्लेख भएका कारण थप कुनै नीतिगत निर्णय गर्नु नपर्ने र समय अनुकूल भए लगत्तै बोर्डले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् । कक्षा १२ को पनि परीक्षा स्थगनकै अवस्थामा छ । उक्त परीक्षा गत वैशाखमा सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो तर सरकारको निर्देशनपछि चैत ५ गते परीक्षा रोकिएको थियो । शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्र दैनिकमा यो खबर
भोली रुसले कोरोना विरुद्धको औषधि लन्च गर्ने, रास्ट्रपति पुटिनले निकाले यस्तो बिज्ञप्ति (बिज्ञप्तिसहित)